कोरोनाले विदेशमा रहेका ३४५ जना नेपालीको निधन — Arthatantra.com
Arthatantra.com > कोरोना > कोरोनाले विदेशमा रहेका ३४५ जना नेपालीको निधन
कोरोनाले विदेशमा रहेका ३४५ जना नेपालीको निधन
लण्डन । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विदेशमा थप ३ जनासहति ३४५ जना नेपालीको निधन भएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिका संयोजक डा. सन्जिव सापकोटाका अनुसार यो साता प्राप्त तथ्यांकअनुसार यूकेमा २ जना र क्यानाडामा १ जना गैरआवासीय नेपालीको कोरोना संक्रमणका कारण निधन भएको हो ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अनुसार विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण हालसम्म २२ देशमा रहेका ३४५ जना नेपालीको निधन भएको छ । संयोजक डा. सापकोटाका अनुसार यो साता बेल्जियम, मलेसिया र युएईमा रहेका नेपालीहरुमा थप कोरोना संक्रमण देखिएको छ ।
हालसम्म ५३ देशमा ६३ हजार ८५४ जना नेपालीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । तीमध्ये ६१ हजार ९ सय ८० जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन् । विदेशमा संक्रमणमुक्त हुने दर ९६.८ प्रतिशत रहेको छ। कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा ३ हजार ३७ जनाको निधन भएको छ ।
नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमण हुनेको संख्या २ लाख ७६ हजार ७ सय ५० जना रहेको छ भने २ लाख ७२ हजार ४ सय ३५ जना कोरोना मुक्त भएका छन् । संक्रमणमुक्त हुने दर ९८.४ प्रतिशत रहेको छ ।
संयोजक डा.सापकोटाले पछिल्ला दिनमा भारतमा संक्रमण तीव्र बनेको रभारतबाट नेपाल फर्किनेको संख्या बढिरहेकाले सबैलाई अनिवार्य स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन आग्रह गर्नुभएको छ ।
यसैबीच काठमाडौंमा पछिल्लो समय फैलिएको धुलो धुवाँबाट जोगिन स्वास्थ्य समितिले सुझाव रहेको छ । डा. सापकोटाले प्रदूषणले स्वासप्रश्वास लगायत भर्खरै कारोना संक्रमणमुक्तहरूलाई बढी असर गर्ने भन्दै सावधानी अपनाउन आग्रह गर्नुभएको छ ।
तत्कालिन रूपमा आँखा पोल्ने, आँखा चिलाउने, आँखा रातो हुने लगायतका लक्षणहरू देखिने र पछि दीर्घकालमा समेत असर पर्ने उहाँले बताउनुभयो । अत्यावश्यक बाहेक घरबाहिर ननिस्कन र निस्किहाले पनि शरीर ढाक्ने कपडालगाउने, मास्क तथा चस्मा समेत लगाउन डा. सापकोटाले सुझाउनुभएको छ ।
२०७७ चैत्र १५ गते १३:०२ मा प्रकाशित
नेप्सेमा दुईको कम्पनीको २२ लाख ९१ हजार २२७ कित्ता बोनस शेयर सूचिकृत, कुनको कति ?
एक हप्ताभित्रमा सवै स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाइने
दुई लाख कित्ता आईपीओ नेप्सेमा सूचीकृत